Tantara: Ny Avana Voalohany - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
FANTATRAO ve ny zavatra voalohany nataon’i Noa rehefa nivoaka ny samboﬁara izy sy ny ﬁanakaviany? Nanao fanatitra na fanomezana ho an’Andriamanitra izy. Hitantsika manao izany izy eto amin’ny sary ambany. Nanao fanatitra biby i Noa mba hisaorana an’Andriamanitra noho ny namonjeny ny ﬁanakaviany tamin’ny Safodrano lehibe.
Tsy ela dia maina tanteraka ny tany, ary nanomboka ﬁainam-baovao i Noa sy ny ﬁanakaviany tany ivelan’ny samboﬁara. Nitsodrano azy ireo Andriamanitra ka niteny hoe: ‘Aoka ianareo ho maro anaka. Aoka ianareo ho maro be mandra-pahafeno olona ny tany manontolo.’
Araka ny hitanao eo amin’ny sary, inona no nataon’i Noa voalohany, rehefa nivoaka ny samboﬁara izy?
Inona no nasain’Andriamanitra nataon’i Noa sy ny ﬁanakaviany taorian’ilay Safodrano?
Inona ilay ﬁfanekena nataon’i Jehovah tamin’ny zavaboary rehetra eto an-tany? (Gen. 9:10, 11)
Mandra-pahoviana io ﬁfanekena ny amin’ny avana io no hanan-kery? (Gen. 9:16)